Mozika maimaimpoanan’ny farany Atsimo: fitaovana fanaovana tahirinkevitra! · Global Voices teny Malagasy
Mozika maimaimpoanan'ny farany Atsimo: fitaovana fanaovana tahirinkevitra!
Voadika ny 06 Aogositra 2019 12:40 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra espaniôla nivoaka tamin'ny Novambra 2014)
Taorian'ny taona marobe nilalaovana mozika, nanontany tena izahay ny amin'ny maha-zavadehibe ny tokony hanaovana tahirinkevitra momba ireo tarika mpiangaly mozika milaza zavatra kely momba ny tena zavamisy manodidina antsika: ahoana no fomba iresahan-dry zareo ireo zavatra hafa azo asolo ny herisetra ao Meksika? Inona no azontsika ambara momba ny fanavakavaham-bolonkoditra? Azo atao ve ny miresaka ny tsy fitoviana? Ahoana no anoratan-dry zareo an'ireny zavatra hafa azo atao fanolo ireny? Azo atao ve ny miaraka miasa mba hanangana votoaty iray ho an'ny mozika ahitàna fisaintsainam-piarahamonina? Ho an'izay asa izay, tena nilaina ny nanontany hoe fitaovana toy ny inona no mety ka ahafahan'ny mozika ho azo zaraina tsara amin'ny fomba mahomby. Dia toy izany no nahaterahan'ny filàna manorina ny DIT Rack fandraketana tahirinkevitra ara-kolontsaina.
Asa nifandrimbonana izy ity, tamin'ny fandraisana anjara hatrany amin'ny famolavolàna ny tena fotony ambany indrindra:
Manasa ireo vondrom-piarahamonina mikatsaka fiovàna izahay mba hanampy anay miaraka amina votoatin-tsary avy amin'ny Rack:
Vondrom-piarahamonina Stickeros miara-miasa
Ny asa farany dia io Rack io izay miaty ireo fitaovana fototra rehetra ahafahana misoratra alohan'ny hanombohana ny fandraketana.
Rack D.I.T. vonona hanao ny fandraketana!
Amin'ny lafiny rehetra, maninona no zavadehibe ny fandraketana ny momba antsika? Heverinay fa zavadehibe ny mandre ny feon'ireo manodidina antsika. Inoanay fa ny fianarana mihaino sy ny hoe nisy nihaino dia ahafahana mametraka endrika fiarahamiasa mozikaly izay manambatra sela sosialy iray. Ireo voalohany nandray anjara dia ry Mayaclan sy PatBoy, izay anoloranay ny fampidirana manaraka.
14 ora izay